विद्यालय भर्नाकै दिन पुस्तक- देश - कान्तिपुर समाचार
विद्यालय भर्नाकै दिन पुस्तक
भर्नाकै दिन छोराछोरीले नयाँ पुस्तक पाउँदा अभिभावक खुसी
वैशाख ८, २०७४ गिरुप्रसाद भण्डारी
प्यूठान — जिल्लामा विद्यार्थी भर्ना भएकै दिन नयाँ पुस्तक दिन थालिएको छ । जिल्लाका सबै विद्यालयमा वैशाख ३ देखि ८ गतेसम्म सञ्चालन हुने भर्ना अभियानमा विद्यार्थीलाई नयाँ पुस्तक वितरण गरिएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ ।
‘भर्ना भएकै दिन पुस्तक दिन निर्देशन गरेका छौं,’ विद्यालय निरीक्षक दुर्गा खड्काले भने, ‘आइतबारदेखि अभियान सुरु गर्‍यौं ।’ यसपालि शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै अभाव नहोस् भनेर सबै विद्यालयलाई पुस्तक जोहो गर्न भनेका छौं । अधिकांश विद्यालयले पुस्तकको व्यवस्थापन गरिसकेका छन् । भर्नासँगै यसपालि नयाँ पुस्तक छोराछोरीलाई दिन पाउँदा अभिभावकसमेत खुसी छन् । तीन छोराछोरीलाई माण्डवी माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना गरेर पुस्तक ल्याइदिएको माण्डवी ३ जसपुरका मेघबहादुर मिजारले बताए । ‘नयाँ पुस्तक पाउँदा छोराछोरी खुसी भएका छन्,’ उनले भने ।
माण्डवी माविले आइतबारबाट विद्यार्थी भर्ना सुरु गरेर नयाँ पुस्तक वितरण गरिरहेको प्रधानाध्यापक मेघराज पौडेलले बताए । यसपालि पुस्तक पाइने खबरले सुरुकै दिनमा अभिभावक आफ्ना छोराछोरीलाई भर्ना गराउन आएको पौडेलले बताए । कक्षा १ देखि ५ सम्मको प्रत्येक कक्षाको ३० सेटका दरले र कक्षा ६ को एक सय सेट, ७ को ८०, ८ को ८०, ९ को ९० र १० को ८१ सेट पुस्तक दुई साताअघि नै ल्याइएको उनले बताए ।
गत शैक्षिक सत्रमा विद्यालयमा १ देखि १० कक्षासम्म ७ सय २३ विद्यार्थी रहेको र यस वर्ष विद्यालयले कक्षा तीनसम्म अंग्रेजी माध्यमको पठनपाठन सुरु गरेकाले विद्यार्थी बढ्ने अनुमान गरिएको विद्यालयले जनाएको छ । ‘पहिलो दिनमै ३ सय बढी विद्यार्थी भर्ना भए,’ पौडेलले भने, ‘सबै विद्यार्थीलाई पुस्तक पनि दियौं ।’ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर भर्ना हुने विद्यार्थीले पालना गर्नुपर्ने ११ बुँदे नियम बनाएर भर्ना खुला गरिएको शिक्षक–अभिभावक संघका अध्यक्ष मीनबहादुर भट्टराईले बताए । उनले विद्यार्थी भर्ना गर्दा अभिभावकले सहयोगस्वरूप न्यूनतम शुल्क विद्यालयलाई प्रदान गर्ने नियम बनाइएको बताए । ‘विद्यालयको शैक्षिकस्तर वृद्धि हुँदै गएको छ,’ नातिनी भर्ना गर्न आएका स्थानीय जोगबहादुर थापाले भने, ‘गत वर्ष भवन बनाउन ९६ हजार विद्यालयलाई सहयोग गरेको थिएँ ।’
धादिङ– विद्यालय भर्ना अभियान सुरु भइसक्दा पनि सामुदायिक विद्यालयको पुस्तक जिल्लामा अझै आइपुगेको छैन । राजधानीसँगै जोडिएको धादिङमा करिब ५ सय सामुदायिक विद्यालयका लागि करिब ३० हजार थान पुस्तक आवश्यक पर्छ । ‘निजीले छाप्ने प्राथमिक तहका करिब सबै तहका पुस्तक पाइए पनि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले छाप्ने ६ देखि १० कक्षासम्मका पुस्तक पाइएको छैन,’ त्रिपुरा पुस्तक पसलका सञ्चालक नारायण श्रेष्ठले बताए ।
हरेक कक्षाको पुस्तक सेट अपूरो भएपछि हामीले नल्याएका हौं,’ अर्का पुस्तक व्यवसायी हरि श्रेष्ठ बताउँछन् । जिल्लामा पुस्तक ढुवानी गर्ने रकम केन्द्रले नै व्यहोर्नुपर्ने भए पनि विगत २ वर्षदेखिको ढुवानी खर्च करिब ५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी नदिएको पुस्तक व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
प्रकाशित : वैशाख ८, २०७४ ०८:१३
रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा कहिले ?
- १०/१५ दिनमै ठेक्काको टुंगो लाग्छ : पुरातत्त्व विभाग - निर्माण सुरु भएको डेढ वर्षमा सकिने
वैशाख ८, २०७४ दामोदर न्यौपाने
काठमाडौं — भूकम्पले क्षतिग्रस्त रानीपोखरी पुनिर्निर्माण अझै सुरु भएको छैन । गत तिहारमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अघिल्लो वर्ष राष्ट्रिय भूकम्प दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रानीपोखरी पुनर्निर्माणको शिलान्यास गरेकी थिइन् । निर्माणको जिम्मा पाएको काठमाडौं महानगरपालिकाले पुरातात्त्विक मापदण्ड विपरीत कन्क्रिट प्रयोग गरेर बनाएपछि पुरातत्त्व विभागले मापदण्डअनुसार बनाउन निर्देशन दिएको थियो ।
महानगरले आफूसँग तदनुकुल जनशक्ति र सामग्री नभएकाले बनाउन नसक्ने बताएपछि काम रोकिएको छ । विभागले ठेक्कामार्फत रानीपोखरी भित्रको बालगोपालेश्वर मन्दिर आफैं पुननिर्माण गर्ने भएको छ ।
भुइँचालो दिवसको अवसर पारेर गत वर्षको माघ २ गते यसको शिलान्यास भएको थियो । मन्दिरको ढलानसमेत गरेपछि पुरातत्त्वले भत्काउन आदेश दिएको महानगरले गुनासो गरेको छ । यसको निर्माणको ठेक्का वल्र्डवाइड कँडेल केनकेजी जेभीले पाएको थियो । रानीपोखरी पुनिर्माण दुई तहमा हुने भएको छ । मन्दिरको काम पुरातत्वले गर्ने भएको छ भने मन्दिर बाहिरको क्षेत्रको पुननिर्माण काठमाडौं महानगरपालिकाले नै गर्ने भएको छ । ‘हामीले बनाइसक्थ्यौं, महानगरका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘पहिला जस्तो थियो, त्यस्तै बनाएको हो । बनाउन्जेल पुरातत्व चूप लाग्यो । पछि सञ्चारमाध्यमा आएपछि मात्रै भत्काउन आदेश दियो । बनाउन सुरु नगर्दै सुझाव दिएको भए बनाइसकेर बीचमा ब्रेक गर्नु पर्दैनथ्यो ।’
२०३२ सालमा जीर्णाेद्धार हुँदा नै कंक्रिट प्रयोग गरिएको भन्दै इन्जिनियरले भने, ‘त्यतिबेला पुरातत्त्व विभागले किन कंक्रिट प्रयोग गर्‍यो ? त्यतिबेला किन मापदण्ड विपरीत बनाउन दियो ?’ पुरातत्व विभागले भने महानगरले इष्टमेट नपठाइ काम सुरु गरेकाले कसरी काम भइरहेको छ भनेर थाहा नभएको दाबी गर्दै आएको छ । बिगतको गल्तीबाट पाठ सिकेर अब राम्रो काम गर्न स्थानीयवासीले माग गर्दै आएका छन् । ‘हामी बलियो बनाउने नाममा सम्पदा मासिन दिँदैनौं,’ सम्पदा जोगाउन अभियान चलाइरहेका आलोकसिद्धि तुलाधर भन्छन्, ‘पहिला जस्तो थियो, त्यस्तै बन्नु पर्छ । मापदण्डविपरीत गए हामी फेरि आन्दोलनमा उत्रिन्छौं ।’ पुरातत्त्वले मन्दिरको काम सुरु नगरेकाले महानगरले पनि बाहिरको काम सुरु गरेको छैन ।
रानीपोखरीलाई महानगरले म्युजिकल वाटर फाउन्डेसन पार्कका रूपमा विकसित गर्ने योजनासहित काम अघि बढाएको थियो । रानीपोखरीको छेउमा बस्नका लागि पार्कसमेत निर्माण गर्ने महानगरको लक्ष्य छ । यहाँ आउने पर्यटकका लागि टिकट काटेर घुम्ने व्यवस्थासमेत गरिने महानगरले जनाएको छ । यसबाट दैनिक १ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने महानगरको योजना छ ।
पुरातत्त्वले भित्री संरचना बनाउन नयाँ लागत स्टमेट तयार गरेको छ । जसअनुसार भित्री संरचना बनाउन भ्याटबाहेक १ करोड २६ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान रहेको विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सम्पत्त घिमिरेले बताए । बाहिरी भित्री गरेर यसअघि झन्डै १० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । ‘अब १५ दिन भित्रमा सबै ठेक्का प्रक्रिया टुंगिन्छ,’ घिमिरे भन्छन्, ‘निर्माण सुरु भएको डेढ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।’ महानगरले मापदण्ड मिचेको थाहा पाएपछि सम्पदा जोगान लागिरहेका युवा समूहले खबारदारी गरे । आन्दोलनमा उत्रिएपछि सञ्चारमाध्यमको पनि ध्यान गयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि चासो दियो । त्यसपछि विभागले काम रोखेर पुरातात्त्विक मान्यता नमचिने गरी पुनर्निर्माण गर्न महानगरलाई निर्देशन दिएको थियो ।
गुम्बज शैलीको यो मन्दिर बनाउन इँटाको गारो र त्यसलाई जोड्न चुना, सुर्की, मासको दाल लगायत प्रयोग भएको छ । अहिले जस्तो रड, सिमेन्टको आविष्कार नभएकाले सबै प्राचीन मन्दिर, घर, दरबार बनाउन यही सामान प्रयोग हुन्थे । ‘पुनर्निर्माणका नाममा यी पुरातात्त्विक वस्तुलाई हटाउन पाइँदैन,’ शाक्य भन्छन् । रानीपोखरीलाई नेवारी भाषामा न्हुहु पुखु भनिन्थ्यो । न्हुहु पुखु भनेको नयाँ पोखरी हो । प्रताप मल्लले आफ्ना दुई रानी रूपमति र राजमतिको सम्झनामा पोखरी तथा मन्दिर निर्माण गरेकाले यो शोकको प्रतीक पनि हो । न्युरोडका शैलेश शाक्य भन्छन्, ‘शोकको प्रतीकमा महानगरले डुंगा चलाएर पैसा कमाउने उद्देश्य राखेको छ ।’ संस्कृतिविद् यज्ञमानपति वज्राचार्यका अनुसार रानीपोखरी तान्त्रिक विधिअनुसार बनाइएको हो । यहाँ पानी भर्न पनि तान्त्रिक विधि अपनाइनु पर्ने उनी बताउँछन् ।
बस खस्दा १ को मृत्यु, १० घाईते
अस्पताल हस्तान्तरणमा विवाद
सहमतिमै तोडियो ‘सिन्डिकेट’
बलात्कृत महिलाको हत्या प्रयास